FJKM Ankadifotsy Ny akoran’atody,tena mahasoa ! / Hainao ve / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Ny akoran’atody,tena mahasoa !28/02/2015 17:16
Manamafy ny taolana sy mampiakatra ny hery fiarovana ao amin’ny vatana, manadio rà…Tena ilaina ho an’ny fahasalamantsika ny akoran’atody ka aza ariana intsony ary e. Ireto ny santionany amin’ireo soa azo avy aminy:
Ny akoran’atody,tena mahasoa !
Manamafy ny taolana sy mampiakatra ny hery fiarovana ao amin’ny vatana, manadio rà…Tena ilaina ho an’ny fahasalamantsika ny akoran’atody ka aza ariana intsony ary e. Ireto ny santionany amin’ireo soa azo avy aminy :
Miady amin’ny fiakaran’ny cholestérol ratsy ao amin’ny rà sy ny tosi-drà ambony ny akoran’atody. Manamafy ny taolana sy mitsabo ny fanaintainana mpahazo ny vanintaolana koa izy no sady manamafy ny foto-bolo sy ny hoho… ireo rehetra ireo dia noho ny fananan’ny akoran’atody amin’ny tahany ambony mineraly maro toy ny calcium, cuivre, manganèse, zinc, fluor, phosphore…
Fikarakarana afaka atao :
Manamafy ny taolana sy miantoka ny fatran’ny calcium ilain’ny vatana isan’andro: Rehefa mandroso ny taona dia mihamarefo ny taolana. Mba amerenana ny tanjany ary dia mahavàra manisy vovoka akoran’atody ao amin’ny sakafo. Miantoka ny fatran’ny calcium ilain’ny vatatsika ny fanaovana izany isan’andro. Totoy ho lasa vovoka malemy tsara ny akoran’atody ka isaky ny mihinana yaourt sy vokatra avy amin’ny ronono hafa ianao dia asio amin’io vovony io, sahabo 2g. Afaka ampiarahana amin’ny laoka sy ny lasopy koa izy ity.
Manadio rà sy mampiakatra ny hery fiarovana ao amin’ny vatana : poteho ny akoran’atody 5 ka ampiaraho amin’ny rano efa nangotraka tsara 3 litatra. Tehirizo anaty vata fampangatsiahana mandritra ny herinandro ka io no ataovy rano fisotro, 2 na 3 kaopy isan’andro ohatra (afaka asina ranom-boasarimakirana kely), ny ambiny fenoina amin’ny rano hafa efa mahazatra antsika ihany.
Mampitony ny fanaintanana mpahazo ny vanin-taolana: poteho madinika ny akoran’atody, ataovy anaty tavoahangy vera ary tondraho vinaingitra azo avy amin’ny paoma (vinaigre de cidre). Sarony tsara ary avelao hilona ao mandrapahalevon’ny akoran’atody (eo amin’ny roa andro eo). Io fangaro io no hikosehina ny faritra manaintaina.
Fepetra mila tandrovana
Akoran’atody gasy no tena mety indrindra anaovana ireo fikarakarana ireo. Rehefa tena ampiasa azy dia diovy tsara aloha satria misy bakteria mety hitondra aretina ho an’ny vatana ny ivelan’izy ireny.
Ankoatr’ireo dia mahatsara ny voly vonikazo, ilaina ny amin’ny fanadiovana ny fitaovana ao andakozia koa ny akoran’atody. Andron’ny fitsitsiana izao ka aleo tsy ariana intsony ary izy ireny fa misy ilaintsika azy foana ao antokatrano ao.
Mahità vokatra dia mirary soa indrindra !